Senator Muuse Suudi oo sheegay in aan DFS loo deyn karin baaritaanka dhallinyaradii lagu laayay Gololey | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Senator Muuse Suudi oo sheegay in aan DFS loo deyn karin baaritaanka...
Senator Muuse Suudi oo sheegay in aan DFS loo deyn karin baaritaanka dhallinyaradii lagu laayay Gololey
Muqdisho (Halqaran.com) – Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan Aqalka Sare ee dalka ayaa ka hadlay falkii argagaxa lahaa ee Khamiistii lagu laayay dhalinyaro badan oo ka soo jeeda Gobolka Shabellaha dhexe.
Dil wadareedka loo gaystay dhalinyaradaasi, ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Gololey ee Gobolka Shabellaha dhexe, kadib markii 8 dhalinyaro dhaqaatiir da‘yar ahaa lagu laayay halkaasi.
Senator Muuse Suudi oo arrintaasi ka hadlay, ayaa wuxuu sheegay Baaritaanka dhacdadaasi in aan lagu aamini karin dowladda Federalka Soomaaliya, maadaama kiisas hore oo dilal dhacay laga wada aamusay oo aysan jirin cid soo bandhigtay natiijada Baaritaanka arrintaasi.
“Dadka labada meelood lagu laayay waa isku hal dad. Baabuurta ciidamada laga qarxiyey 9 ayaa ku dhimatay, dhaqaatiirta la laayeyna 8 ayaa dhimatay… Wiilasha nin ka mida oo dhaqaatiirta ahaa isagoo indhaha ka xiran ayaa yiri: annaga sidaad rabtiin na yeela ee Gabdhaha dhaafa..” ayuu yiri Muuse Suudi oo intaas ku daray inuu arrintan baaris ku sameeyay.
Waxa uu sheegay inaysan ahayn in Ciddii dhimata Shabaab loo aaneeyo , isagoo soo qaatay Geeridii Gudoomiyihii Gobolka Banaadir C/raxmaan Yariisow oo uu sheegay inay weli shaki ka qabaan cidda abaabushay dilkiisa.
“Arrintan dad dowladda u shaqeeya oo in shaqada laga baxsho ka cabsanaaya baariteeda laga sugi maayo, waxaan kaloo laga sugeynin dad isku buqdan oo waxba kala ogeyn.. arrintan caalamka ayaa laga sugayaa, wax lagu kalsoon yahay oo dalkan ka jiro ma jiraan” ayuu yiri Muuse Suudi.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sameynayso Baaritaano ku aadan cidda ka dambeysay dilkaasi foosha xun ee loo gaystay dhalinyarada la laayay.